Kadib In Mourinho Uu Bilaa Wadne Ku Tilmaamay Ciyaartoyda Kooxdiisa, Muuqaal Uu Marcus Rashford Ku Beeniyay Hadalka Mourinho Iyo Lukaku Oo Ku Sifoobay Eeda Mourinho. - GOOL24.NET
Kadib In Mourinho Uu Bilaa Wadne Ku Tilmaamay Ciyaartoyda Kooxdiisa, Muuqaal Uu Marcus Rashford Ku Beeniyay Hadalka Mourinho Iyo Lukaku Oo Ku Sifoobay Eeda Mourinho.
Tababaraha kooxda Manchester United ee Jose Mourinho ayaa halkiisa ka sii waday in uu eedayn u soo jeediyo ciyaartoyda kooxdiisa kadib barbarihii niyadajabka lahaa ee ay Old Trafford kula galeen Crystal Palace. Mourinho ayaa ciyaartoyda kooxdiisa ku eedeeyay in ayna lahayn qalbigii ay ku dagaalami lahaayeen.
Laakiin taageerayaasha kubbada cagta gaar ahaan kuwa Manchester United ayaa muujiyay in Mourinho aanu run ku sheegin in Marcus Rashford uu ka mid yahay ciyaartoyda uu ku eedeeyay in ayna lahayn wadne ay ku dagaalami karaan.
Jose Mourinho oo eedayn u soo jeedinayay ciyaartoyda kooxdiisa ayaa yidhi: “Waxaa waajib kugu ah in aad ku ciyaarto maskax iyo sidoo kale wadne, waxaanan filayaa in ayna ahayn wadne ku filan. Maanu lahayn xoganaantaas, waxayna fikrad ahaantayda la xidhiidhaa maskaxdaada iyo qalbigaaga”.
Mourinho ayaa ku tilmaamay in kulankii Crystal Palace uu kooxdiisa u ahaa mid khaas ah wuxuuna yidhi: “Waxaa jira kulamada qaar khaas ah oo aan ka ahayn mid dheeraad ah, kulankani khaas ayuu ahaa. Waa midka ugu horeeya siddeed kulan ee ilaa dhamaadka December, waxaana kulanka looga baahnaa in aanu guulaysano, may ahayn in ku filan oo wadnaha ka timid”.
Muuqaalka lagu beeniyay in Rashford uu muujiyay wadne uu ku dagaalamo ayaa ah mid dhacay markii ay 19 daqiiqo ka hadhsanayd kulankii Old Trafford waxaana kubbad laaga xorta ah heshay C.Palace.
Laakiin Rashford ayaa kubbada la soo saaray taakal xoogan kaga hor qaaday ciyaartoy Crystal Palace ah, laakiin kubbada ka dheeraatay ee uu weerarka deg dega ah ku abuuray ayuu markale taakal kale la tiigsaday ciyaartoyga kale wuxuuna ku abuuray fursad cajiib ah oo gool dhalineed.
Laakiin fursadii uu soo abuuray Rashford ee uu sii dheereeyay Alexis Sanchez waxaa si bilaa micno ah oo waliba qaab aad u liita ah u qasaariyay Lukaku kaas oo ku sifoobay eedaynta Jose Mourinho. Sida aad muuqaalka ka arki karto Rashford dagaal adag ayuu u soo galay in uu fursadan soo abuuro balse arag waxa uu Lukaku sameeyay.
Halkan ka daawo muuqaalka uu Rashford iskaga fogeeyay eedaynta Mourinho iyo qaabka uu Lukaku uu eedaynta Mourinho ugu sifoobay.
Can’t say he doesn’t lack heart pic.twitter.com/jmgpIDJt57
— TheFootballAddick (@FootballAddick) November 25, 2018
Jamaahiirta Man United ayaa fikradooda ka dhiibtay waxayna muujiyeen in Rashford uu lahaa wadne uu ku dagaalamay balse aanu eedaynta Mourinho uu bari ka yahay.